Wallpaper A ama asalka waa sawir digital (sawirka, barbaro iwm) loo isticmaalaa sida soo jeeda madaxtooyada ee ah interface user garaafyada shaashadda kombiyuutarka, qalabka isgaarsiinta gacanta ama qalab kale ee elektaroonigga ah. On computer ah waxaa sida caadiga ah waxaa loogu talagalay desktop-ka, halka taleefanka gacanta waxaa sida caadiga ah waa asalka for the 'guri' ama screen 'oo aan waxtar lahayn'. In kastoo qalabka ugu soo sawirka default ah, dadka isticmaala inta badan waxay bedeli kartaa in files caadadii ay doortaan. "Wallpaper" wuxuu ahaa eray laga isticmaali ee Microsoft Windows hor Windows Vista (meesha waxa loo yaqaan "asalka desktop"), halka Mac OS X waxa uu ugu yeerayaa "sawirka desktop". (Hore, hannaankii desktop muddada loo isticmaalay si uu u tilmaamo qaab yar oo la soo noqnoqda in la buuxiyo shaashadda.)
Microsoft ee Windows Phone wallpapers waa images digital iyo sawiro loo isticmaalaa sida soo jeeda, waayo, guriga ama screen aan waxtar lahayn. Waxa kale oo ay beautifies telefoonka siinaya eegno la jecel yahay.
Top 15 wallpapers qurux badan u phone Windows
Sida loo beddelo wallpapers u phone Windows.
TOP 3 wallpaper APPS EE PHONE WINDOWS
Qorshahaa waxa fudud u qurux badan in wallpaper tani waa laambaddii wax fudud laakiin qayb ka mid ah catchiest laambadda tani waa ololka ugu maleeyeen. Halkii ololka dabka, waa design qurux badan glassy, ​​biyo ololka. Tani xabbad la jecel siin doonaa eegno quruxsan inuu kuu waco daaqadaha.
Wallpaper Tani la yaab leh, waayo telefoonka daaqadaha ayaa design u eg ololaya oo qaab wareeg ah iyadoo cagaaran iyo iftiinka falaadhaha buluug khafiif ah radiating xarunta sida qiiq oo kale ah. Design Tani waa uun si fudud u fiican ee aad telefoonka daaqadaha.
Tani wallpaper aad u soo jiidasho u phone daaqadaha ayaa design iftiinka ama dab-sida gorgor American ah. Iyada oo warqad derbigan ku saabsan telefoonka daaqadaha, doonistaada kabuuxiyo qabow.
Tani waxay warqad derbiga raadinaya weyn muujinaysaa webiga la dhagaxyada hareeraha iyo cows koraya dhagaxa qaar ka mid ah. Tani design qurxoon ee wallpaper waa design ah classical kaliya weyn oo aad telefoonka.
Tani waa warqad derbi fudud, qurux badan laakiin classic loogu talagalay telefoonka daaqadaha. Waa design lamadegaanka raadinaya siman oo qurxoon, oo geed la jecel yahay oo keliya taagan. Tani dhab ahaan waa warqad derbi inay leeyihiin.
Tani waxay warqad derbi la jecel yahay design fudud ka soo jeeda madow iyo makarafoon ololaya. Tani design ruxid warqad derbiga siin doonaa telefoonka "wow" eegno.
Tani waxay warqad derbiga daaqadaha waa isku darka weyn ee jaalaha ah, oo cagaar ah, oo casaan iyo buluug oo ka soo jeeda ah u milicsato. Tani waa warqad derbiga mid kasta oo hubaal jeclaan doonaan in ay leeyihiin.
Tani waxay warqad derbiga cajiib ah ayaa baabuur leh qurux madow leh sigaarka Taayirada on wadada taas oo aad u fiican, waxaana classic.
Design Tani gaarka ah ee warqada derbiga leeyahay asal blueish qurux badan leh qaar ka mid ah ubaxa soo jiidasho leh casaan iyo buluug ah. Iyada oo warqad derbigan ku saabsan telefoonka daaqadaha, telefoonka waxba laakiin si fudud gaar ahaan doonaa.
Tani waa warqad la yaab leh derbiga in dhab ahaan maskaxdaada soo afuufi doonaa. Waxay leedahay asal madow oo qoto dheer leh suuradda geesi super ka filim Hollywood ah 'batman', tan ku saabsan telefoonka daaqadaha, waxad dareemi doontaa sida naftaada geesi super.
Tani waxay warqad derbi weyn ee telefoonada daaqadaha soo jiidan doonaa cid kasta oo jecel qurux iyo fasalka. Waxay leedahay samada qurxoon buluug iyo caddaan, iyo ubax, qorraxda qurux taagan oo keliya attractively.
Tani waa mid aad loo jecel yahay ayaa warqad derbiga image ee magaalo qurux badan oo casri ah oo la scrapers samada u qurux badan oo dhan oo iftiimay iftiinka iyo is dajiyaan, webiga raadinaya qabow. Tani waxaa inta badan hubaal ah qof kasta warqad derbi jeclaan doonaan in ay leeyihiin ku shubtaan taleefanadooda daaqadda.
Qoraalkan waxa uu derbiga qaabka uu u muuqata in la rinjiyeeyay ayuu qoryihii dul saaray qaar ka mid ah ayaa ku biiray asalka ah guduudan goobada dhexe cad oo ah logo Bolt Hillaac jaalaha ah ee bartamaha goobada. Tani hubaal waa code midabka, logo iyo naqshadda geesiga super Hollywood ah oo lagu magacaabo "flash ah" wallpaper taasi ka dhigi doonaa phone dareemi u dheereeyeen sida flash ah.
Tani waa design jecel yahay macaan qaloocin shucaaca buluug khafiif ah, ka soo jeeda madow oo qoto dheer iyo logo daaqadaha ku saabsan asalka ah. Tani waa warqad la jecel yahay derbi inay leeyihiin.
Tani waa nooc ka mid ah waraaqaha derbiga aad rabto inaad wacdo "si fudud ugu fiican" Waxa uu leeyahay asalka ah madow ah lagu shido iyo sort qaar ka mid ah oo iftiimay ololka ah casaan, cagaar ah, buluug iyo guduud, iyo casaan. Kaliya in aad u jeclaan doonaa si ay leeyihiin wallpaper this.
Waxaad ka qaadan kartaa sawir kasta oo aad telefoon si ay u isticmaalaan sida asalka ah ee aad Pictures Hub - xitaa sawirada albums online. Weli wanaagsan, aad Pictures Hub sidoo kale muujin karaan doorashada ku noqnoqosho ah sawirada aad tagged sida ugu cadcad. Wax kasta oo aad doorato ayaa sidoo kale ku tusi doonaa ilaa in ka Sawiro Tile kartoon ah oo ku saabsan Start.
Qaadashada tallaabooyinka soo socda ee fudud oo kaa caawin doona inaad beddesho warqadda derbiga daaqadaha:
1. Start, ka jaftaa Sawiro.
2. Tubada More
3. Si aad isku shaandheyn ku soo xulidda ka mid ah kooxaha ugu cadcad, ka jaftaa soo jeeda isku shaandheyn. Mar kasta oo aad ku abuurtaan Pictures Hub ah, Dufcaddii cusub oo ugu cadcad tusi doonaa ku saabsan asalka Hub iyo Tile Sawirro ku saabsan Start.
4. Si aad u soo qaado hal sawir si ay u isticmaalaan sida asalka ah, ka jaftaa Dooro soo jeeda, ka dibna dooro sawirka aad rabto in aad isticmaasho. Sawirka dhaqaaq si ay ula qabsadaan abuurka ah, ka dibna tubbada Dalag
1. Binget: Binget kuu ogolaanaysaa inaad aragto oo dhigay Bing 'wallpaper ee Maalinta' wallpapers sida aad shaashadda bilowga ama image screen qufulka. Inkastoo kuwa ugu danbeeyay qaadan kartaa laba-saddex maalmood ah si ay ugu muuqdaan. Wallpapers waxaa loo kala qaybiyay laba shuruudaha, qaybaha iyo midabo. Waa app qurux badan oo ka shaqeeya sidii loo xayeysiiyaa.
2. Priddy: Priddy waa app ah u samaynta wallpapers aan la taaban karin customizable aad Windows Phone. Waxaa jira in badan oo la dhisay qaab ahaan uu ka soo xusho. Marka aad go'aan ku hannaankii, aad mari kartaa isku-dar midab oo kala duwan. Waxa kale oo aad xiri karaan oo isku jira midab iyo isku day nidaamyo kala duwan u leh. Waxaan ahay taageere weyn oo la taaban karin Priddy ayaa iga caawiyay sameeyo qaar ka mid ah wallpapers qurux badan.
3. Paralaska: Paralaska malaha waa app ee wallpaper ugu gaar ah oo ku saabsan Windows Phone. Waa isku darka ah mawduucyada yar farshaxanka. Theme kasta ka kooban yahay qaar ka mid ah xubno ka falgal. Waxaad dhaqaajin karin, kuwaas oo xubno bidix iyo midig si ay u abuuraan aad goobta kaamil ah. Waxaa jira afar mawduuc laga heli karo hadda kala ah Paranormal, Parallax City, Forest iyo is barbar socda Caalamka.
Xakamee Samsung Kies ee PC Gebi!
Import Xiriirada ka Outlook Express in Windows Live Mail
> Resource > Windows > Top 15 wallpapers looga cabsado, waayo, phone Windows